Ihe Ga-enyere Gị Aka Ịkpa Ndị Ọzọ Nso na Imete Ha Enyi | Ndị Na-eto Eto
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Moore Myanmar Nepali Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Burugodị ụzọ mata ndị ọ kacha e siri gị ike ịkpa nso.
Afọ ndụ ha:
Ndị ọ na-esiri m ike ịkpa nso bụ . . .
ndị ọgbọ m
ndị tọrọ m
ndị tọgburu m atọgbu
Ihe e ji mara ha:
ndị na-emete ihe karịa ibe ha
ndị ụbụrụ na-aghọ nkọ
Ụdị ndị ha bụ:
ndị obi kara
ndị na-akpa iche
Ihe nke abụọ ị ga-eme bụ ịchọpụta ihe ị na-eme ma gị na ha nọrọ. Kanyezie ihe na nke ọ bụla n’ime ihe e kwuru n’okpuru ebe a dabara n’ihe ị na-eme ma gị na ha nọrọ.
M na-eme ka mụ na ha ànyị bụ otu.
M na-ekwu ihe na-amasị m, ọ bụghị ihe na-amasị ha.
M na-agbachi nkịtị ma na-achọ otú m ga-esi si ebe ahụ pụọ.
Ihe nke Atọ ị ga-eme bụ imete ndị ọzọ enyi. Ọ bụghị mgbe niile ka i kwesịrị ịchọ ka ndị ọzọ bịa mete gị enyi. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịga mete ha enyi. (Ndị Filipaị 2:4) Olee otú i nwere ike isi eme ya?
Mete ndị na-abụghị ndị ọgbọ gị enyi. Jụọ onwe gị, sị: Olee ihe mere m ji na-emete naanị ndị ọgbọ m enyi ma na-asị na ahụghị m ndị mụ na ha ga-abụ enyi? Nke a yiri mmadụ ịnọ na mmiri na-achọ mmiri ọ ga-aṅụ.
Otu nwa agbọghọ dị afọ iri abụọ aha ya bụ Helena sịrị: “ Mama m gwara m ka m gbalịa ka mụ na ndị tọrọ m na-akpa nkata. Ọ sịrị na m ga-ahụ na ọtụtụ ihe na-amasị m na-amasịkwa ha. Ihe ahụ o kwuru bụ eziokwu, o meekwala ka m nwee ọtụtụ ndị enyi! ”
Mụta otú gị na ndị ọzọ ga-esi na-akparịta ụka nke ọma. Ihe ndị ga-enyere gị aka bụ: (1) ige ntị, (2) ịjụ ajụjụ (3) ịhụ ndị ọzọ n’anya.—Jems 1:19.
Otu nwa agbọghọ dị afọ iri na asatọ aha ya bụ Serena, sịrị: “ Ana m ege ntị nke ọma mgbe ndị ọzọ na-ekwu okwu, anaghị m achọ ka naanị m na-ekwu ihe niile. M chọọ ikwu okwu, ana m agbalị ka m ghara ịna-eto onwe m ma ọ bụ ghara ikwu ihe ga-eme ka e lewe ndị ọzọ anya ọjọọ. ”
Otu nwa okorobịa dị afọ iri abụọ na otu aha ya bụ Jared, sịrị: “ Ọ bụrụ na mmadụ agwawa m ihe m na-amaghị, m na-ajụ ya ajụjụ ka ọ kọwakwuoro m ya. Ọ ga-eme ka mụ na ya na-akparịta ụka na-aga. ”
Otu nwa agbọghọ dị afọ iri na isii aha ya bụ Leah, sịrị: “ Abụ m onye ihere. Ọ bụ ihe mere m ji na-agbalịsi ike ka mụ na ndị mmadụ na-akparịta ụka. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ka ya na ndị ọzọ bụrụ enyi, onye ahụ kwesịrị ịna-emete ndị ọzọ enyi. Ọ bụ ya mere m ji mụta ịna-ekwuru ndị mmadụ okwu. ”